Information in Somali | eoscares NEW
Covid-19 - Information in Somali
Halkan waxaan idinkula wadaagaynaa boggaga soo gudbinaya warbixinada lagu kalsooonyahay ee ku saabsan xaaalada Coronaviruska. Waxaan ahmiyada siinaynaa xaalada dalka Sweden, sababtoo ah sababtoo ah way ku kala duwanyihiin wadamadu sida uu virusku ugu faafayo iyo qaab dhismeedka bulsho ee dhanka dhaqaalaha, dhaqanka iyo siyaasadooduba. Kala duwanaanshahaa ayaa saamaynaya sida stratajiyadoodu u dhisantahay. Waa muhiim inuu shaqsi walba ka faa,iidaystaa warbixinadan khuseeya goobta uu shaqsigu ku suganyahay
Si aad utagto mareegta/bogga caawimaada iyo taageerida riix halkan.
Boggoga iyo mareegyada muhiimka ah
Riix callamadaha/sawirada hoose si aad u hesho warbixino
Mareegtan/boggan waxay kugu sii xidhi doontaa talobixin sidii aad isaga dhawri/ilaalin lahayd adiga iyo dadka kaleba faafida cudurka Coronaha.
Wasaarada caafimaadka qaranka ayaa ka masuul ah arimaha caafimaadka dalka. Wasaarada waxay leedahay inkabadan 500 oo shaqaale khabiiro xirfado kaduwan leh. Kuwaas oo shaqadoodu tahay inay gacan ka gaystaan helida caafimaad wanaagsan oo loo simanyahay, ka hortaga xanuunada iyo dhaawacyada isla markaana joojinta faafida cudurada kana dhawraya bulshada khataraha caafimaad. Xafiiska caafimaadka dalka waxuu dowlada siiyaa talooyin ku aadan arimaha caafimaadka.
Mareegtan waxaad ka helaysaa wararka idaacada Sweden ee ku saasbsan Coronah. Idaacada sweden waxay ka tirsantahay kuwa loo yaqaano ”public serviceka”. Waxay ka dhigantahay waxay u adeegaan bulshada wayna ka madaxbanaanyihiin cilaaqaadyada siyaasada, diinta, dhaqaalaha, dowlada iyo danta shaqsiga. Ma jiro wax ka baxsan Raadiyaha Sweden oo saamayn kara waxa la baahinayo iyo waxa aan la baahinaynin
Mareegtan/Boggan waxaad ka helaysaa warbixinada bulshada ee muhiimka ah e ku saabsan xaalada caabuqa Coronaha. Bogga krisinformation.se waxuu soo gudbiyaa warbixinada xaaladaha adag/musiibada ah. Dhamaan warbixinada lagu soo gudbiyo boggan waa warbixino laga soo xaqiijiyay xafiisyada dowlada iyo hay,adaha kale ee ka masuulka ah.
Dowlada sidan ayay ka tiri cudurkan caabuqa ee cusub → Macluumaadka cusub ee la xaqiijiyay kuna saabsan faayraska karoona
Hagaha daryeelka caafimaadka ee 1177 waxuu isku soo uruuriyay warbixinada ku saabsan cudurka Coronaviruska iyo gobolka Skåne, tusaale ahaan, sida loo helo daryeelka cafimaadka gobolka Skåne, maxay tahay waxa ku haboon in inuu ka fakaro ruuxa ka tirsan dadka unugul cudurka iyo su,aalaha guud ee ku saabsan caabuqa viruska
Mareegtan/boggan waxaa ka helaysaa warbixino lasoo uruuriyay oo kusaabsan cudurka Coronaha ee magaalada Lund.
Warbixino ku saabsan dadka da,doodu ka wayntahay 70 jirka
Halkan waxaa ka helaysaa warbixinada xafiiska caymiska (Försäkringskassan) ee cusub ee khuseeya shaqsiyaadka privateka ah
Mareegtan/boggan waxa ka heli kartaa warbixinada hay,ada macaamiisha (Konsumentverket) ee khuseeya xuquuqahaaga ka shaqsi macmiil ahaan
Lunds kommun now offers take-away school lunches!
Online activities for asylum seekers